साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघमा निर्विरोध नयाँ कार्यसमिति | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अर्थ » साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघमा निर्विरोध नयाँ कार्यसमिति
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघमा निर्विरोध नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघको चौथो अधिवेशन तथा १३ औं वार्षिक साधारणसभाले गुह्यरत्न शाक्यको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
महासंघले देशभरका ५० जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागि महासंघको अधिवेशनबाट पदेन अध्यक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष जंगबहादुर श्रेष्ठ र सहअध्यक्षमा गणेशबहादुर सुवेदी चयन भएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गिरिराज गौतम, प्रथम उपाध्यक्षमा सरोज श्रेष्ठ र चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा द्वितीय उपाध्यक्षमा बलराम भण्डारी, मदन महर्जन र हिराबहादुर प्रधान चयन भएका छन्। तृतीय उपाध्यक्षमा नरेशप्रसाद सिंह र शैलेन्द्रमोहन झा चुनिएका छन् भने चतुर्थ उपाध्यक्षमा मोहिनी विलास लुइँटेललाई चयन गरिएको छ।
त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा यमुनादेवी श्रेष्ठ र विष्णु घर्तीमगर निर्वा्िचत भएका छन्। अन्य उपाध्यक्षहरुमा वस्तुगत संघको तर्फबाट माधव केसी र एशोसिएटतर्फ विजु शाक्य चयन भएका छन्। महासंघको महासचिवमा सुमन सुवाल, कोषाध्यक्षमा धर्मनन्द श्रेष्ठ, सचिवमा विश्वराम दुवाल, सहकोषाध्यक्षमा यज्ञबहादुर थापा निर्वाचित भएको महासंघले जनाएको छ।
शाखा जिल्ला संघबाट केन्द्रीय सदस्यमा छेटुप तामाङ, केदारकुमार कटुवाल, सलिना लामा, सुवास महर्जन, कृष्णप्रसाद शर्मा, शर्मिला कार्की, रेखाबहादुर अधिकारी र कोमलप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन्।
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघमा निर्विरोध नयाँ कार्यसमिति Reviewed by Shiva Shrestha on Jan 14 . काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघको चौथो अधिवेशन तथा १३ औं वार्षिक साधारणसभाले गुह्यरत्न शाक्यको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । महासंघले देशभरक काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघको चौथो अधिवेशन तथा १३ औं वार्षिक साधारणसभाले गुह्यरत्न शाक्यको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । महासंघले देशभरक Rating: 0